Lasitra ranomandry - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Ny lasitra ranomandry misy patanty anay dia mifehy ny fizotran'ny hatsiaka rano.
Ny sary eo ankavanana dia ilay kopia
Ny lasitra ranomandry ataontsika dia maningana sy manala ny bubble rehetra amin'ny rivotra sy ny loto ao anaty rano alohan'ny hamoahana azy ao anaty ireo gilasy na cubes.
Ny lakilen'ny fanamboarana ranomandry madio dia ny fifehezana tsara ny fomba fanamainan'ny rano.
Ity no pitsopitsony mba hanazavana ny antony mahatonga ny lasitra ranomandry ataontsika hahatonga ireo baolina ranomandry tonga lafatra, mangarahara, kristaly ary mamirapiratra, cubes gilasy, diamondra gilasy .........
Amin'ny natiora dia afaka mahita ny ranomandry mazava miforona eo an-tampon'ny kamory izahay, izany dia noho ny fizotran'ny hatsiaka voafehy, izay mitovy amin'ny lasitra ranomandry misy antsika.
Ny mifanohitra amin'izany dia hita ao anaty lovia fitehirizan-dranomandry mahazatra sy mahazatra.
Ao amin'ireo fitoeran-dranomandry mahazatra, ny rano dia mihamangatsiaka avy any ambony sy ambany ary amin'ny lafiny efatra amin'ny fotoana iray. Izany dia miteraka ivon-drahona, dia ireo vongan-drivotra sy fahalotoana.
Ny tany ambany sy ny sisin'ny kamory dia voarehitry ny tany, avy eo ambony rano ka mangatsiaka ny rano.
Izany dia miteraka ranomandry madinidinika eo an-tampony ary atosika ho any ambany ny vongan-drivotra rehetra sy ny loto satria izy ireo no farany nanala.
Mitovy amin'ny ohatra mamorona ranomandry voajanahary, miaraka amin'ny herin'ny fizotry ny hatsiaka voafehy na "directional", ny lasitra ranomandry ataontsika dia mahatonga ranomandry baolina tonga lafatra, ranomandry goba, ranomandry diamondra, ranomandry.
Mangarahara, kristaly ary tsara tarehy 100%.
Ny ranomandry toy izany dia azo amidy amin'ny vidiny lafo kokoa ary mitondra tombony tena lehibe.
Ny vahaolana dia ny fametrahana lasitra ranomandry an-jatony sy an'arivony ao anaty efitrano mangatsiaka.
Miandrasa mandritra ny 48 ora, esory ny lasitra ranomandry rehetra, ary asio lasitra ranomandry vaovao feno rano ho an'ny faribolana vaovao.
Ny olona iray dia ampy hanaovana ny asa rehetra.
Amidio baolina gilasy sy gilasy tonga lafatra an-jatony sy an'arivony ..................
Antsipirian'ny lasitra ranomandry goba
Antsipirian'ny lasitra ranomandry
Antsipirian'ny lasitra ranomandry baolina
Antsipirian'ny lasitra ranomandry diamondra